Maitiro ekugadzirira yangu iPhone yeIOS 9 | IPhone nhau
Maitiro ekugadzirira yangu iPhone yeIOS 9
Iwe unoda kuisa iOS 9 asi usingazive pekutangira? Kusava nechokwadi pamusoro pezvakanakisisa? Tinogona kukubatsira. iOS 9 ichaburitswa pachena pakati paGunyana, asi zvave kutokwanisika kuisa mabetas kana iwe uri vagadziri uye vasiri-vagadziri vachakwanisa kuzviisa mumwedzi waChikunguru, pamwe zvinowirirana neBeta 3 yevagadziri iyo inogona kusunungurwa mumazuva gumi.
Kana izvo zvatiri kuda kugadzirira iyo iPhone kuisa iOS 9, zvinopera pasina kutaura kuti hatidi kungovandudza. Chatinoda kuisa iOS 9 munzira yakanaka kwazvo kuti usadhonza chero dambudziko kubva pane vhezheni yapfuura. Saka, zvakanak kudzorera iPhone kuisa kubva 0.
1 Dzosera ne iTunes
2 Dzosa kubva ku iPhone
3 Ingo gadziridza
Dzosera ne iTunes
Nzira yakanakisa yekuona kuti hatisi kutakura chero zvikanganiso kubva mushanduro dzekare kudzorera ne iTunes. Kana uchidzorera ne iTunes, iyo yese sisitimu yekushandisa ichadzorwa uye kuiswa. Mhedzisiro yacho ichave iyo tichava ne iPhone sezvo yaisiya fekitori, asi ine nyowani system. Asi hazvidiwe kuti iwe urasikirwe nezvose sezvo uchigona kuve nehukama, makarenda, manotsi uye vamwe muICloud. Kudzosa ruzivo urwu hakukanganisa kuiswa kwe0.
Ramba uchifunga kuti zvinokurudzirwa kwazvo kuve ne backup muICloud (izvi hazvireve kunyorera). Zano rangu nderekuti, pachinzvimbo chekugadzirira iyo iPhone usati waisa iOS 9, ita nzira iyi panguva imwe chete neyako yekuvandudza. Mune mamwe mazwi, kana iOS 9 yaburitswa, tinoita nhanho dzinotevera, asi bhatani rekudzorera rinoti "dzosera uye gadziridza":
Isu tinobatanidza iyo iPhone kune komputa.
Tinobaya pane iyo icon icon.
Tinosarudza chishandiso chedu.
Tinobaya pane Dzosera uye Gadziridza.
Isu tinosunungura iyo iPhone.
Isu tinoremadza Tsvaga yangu iPhone (marongero / iCloud, chinja «Tsvaga yangu iPhone»).
Tinomirira kuti system iiswe.
Ini handikurudzire kuita backup muICloud nekuti ipapo inoedza kuitora yese uye isu tinogona kutora kukanganisa kubva kuIOS 8 kuenda kuIOS 9.
Dzosa kubva ku iPhone
Nekuwana yangu yakaremara iPhone, tinoita zvinotevera:
Isu tinodongorera pasi uye tapota paReset.
Tinobaya Delete zvirimo uye marongero.
Isu tinopinda kodhi ye iPhone yedu.
Kana iOS 9 ikabuda, isu tinogadziridza kuburikidza neOTA kana neTunes (zvirinani neTunes).
Pakutanga, yanga isina kusanganisira iyi sarudzo nekuti nayo hapana chinhu chinofungwa. Izvo zvinongovandudzwa kuburikidza neOTA kana neTunes.
Kana iwe uchida kushomeka kuve nematambudziko, inodzoreredzwa uye yakaiswa kubva ku0.
Yechipiri sarudzo yepamusoro kudzorera uyezve kupora kubva backup.
Chechitatu sarudzo ndeyekugadzirisa zvakananga. Ini ndataura pamusoro pechitatu sarudzo nekuti vazhinji venyu hamuna kujeka nezve zvekuita uye munovhiringidza "chii chakanakisa" ne "izvo zvinodiwa."
Panofanirwa kuve pasina dambudziko mune chero ipi sarudzo nhatu, asi zvine musoro, iyo nyowani yekumisikidza, zvishoma "zvikanganiso" zvainazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekugadzirira yangu iPhone yeIOS 9
Douglas Turcios akadaro
Uye kuputsa kwejeri kucharasika
Pindura Turcios Douglas
Adrian jz akadaro
Kwasara 3 months kusvika zvabuda and you are already with these nonsense, this page rinondiita more and more disgmented
Pindura Adrian Jz
Ini ndaneta nekamhinduro dzisina kunaka sedzako. Kana iwe usingade peji rino, wadii kuenda kunotsvaga nhau kumwe kunhu, pane kushoropodza basa revamwe.
Pablo Aparicio, chokwadi ndechekuti pese pandinoona dzimwe nyaya dzinonakidza, uye ndikavhura kuti ndiverenge zvimwe, iwe unowanzo nyora iwe pachako, saka fara, ndinofunga urikuita basa rakanaka kwazvo. Kunyangwe vamwe vangangotadza kuzviziva, usaore moyo, vamwe kana tichizvikoshesa
Ini ndinogara ndichigadzirisa pane kuita yakachena kudzoreredza uye ini handina kana dambudziko ... Izvo zvaive mumavhezheni ekutanga eIOS ... Sezvo OS ichigadziriswa izvozvi, hazvidi kuti udzore kubva ku0.
Hongu ndizvo, hunhu. Yako iphone inofanira kuenda kunge yenguruve yenguruve
Pindura kune elcalan
Uye mubairo wemwedzi wemashoko akapusa anoenda kune elcalan. !! Makorokoto !!
Pindura kuna Rafa
Hazvina kujeka kwandiri kana kamwechete zvadzorerwa kubva pakutanga neTunes, ndinogona kuisa kopi yekuchengetedza yekombuta yangu nezvose zvinoshandiswa nezvimwe, kana izvo zvinogona kudhonza zvingangoita IOS 8 zvikanganiso.
Mhoroi, Retolandia. Ngatione: hazvidikanwe kudzoreredza. Zvinoitika ndezvekuti kana iwe uchida "kugadzirira" iyo iPhone ini ndinofunga imhaka yekuti iwe haudi kugadzirisa pasina zvimwe. Izvo zvakanakira masisitimu ese anogara achiiswa kubva ku0, asi hazvidiwe. Ndosaka ndaisa izvo zviviri zvingasarudzwa. Yetatu ndeye kungo gadziridza. Asi ini ndinowedzera iro ruzivo zvakare saka hapana nyonganiso
Oliver Orb akadaro
Kana iwe usingazvifarire, usataure uye ndizvozvo, mapenzi!
Pindura kuna Oliver Orbe
Ichokwadi, kuti utaure uchizeza, tsime, usangopinda.
Carlos, ndinobvumirana zvachose newe. Kune vanhu vanogona kukubatsira, kwete chete iyo vhezheni ichauya, asi zvakare kudzoreredza vhezheni inogona kunge iri kuvapa iko kukanganisa IZVOZVI. tutorials zvinhu zvisingambokuvadza.
Kwazisai uye dzidzai kuremekedza mabasa evamwe.
kupera kune nguva ye4s ???
Arturo Carrillo akadaro
Asi zvirokwazvo iOS 9 inouya chete kuzopa kugadzikana iyo iyo iPhone 4S yanga isina neIOS 8 asi zviri pachena ikozvino ichave yazvino vhezheni
Pindura kuna Arturo Carrillo
Ignacio Lopez akadaro
Iyo iPhone 4s pamwe neiyo iPad 2 inoenderana zvizere neIOS 9. Chimwe chinhu chichava neIOS 10 yatisingazive kune rimwe gore.
Pindura kuna Ignacio Lopez
ΚΕΦΑΛΗΞΘ (@Closernin) akadaro
Chinhu chakanakisa kudzoreredza kubva pa0 se iPhone nyowani isina kudzoreredza backup, ini ndine GM yekudzoreredza ne backup uye haina kumira mushe kana iyo yepamutemo yekudzorera kubva ku0 ichibuda.
Offtopic: Iyo app manotsi haibude nesarudzo nyowani muPlus
Pindura kuna ΚΕΦΑΛΗΞΘ (@Closernin)
Yakagadziriswa manotsi chinhu muIOS 9
Yakatsigirwa tweaks iOS 8.3
TaiG inogadziridza yayo jailbreak kune vhezheni 2.1.3 yekugadzirisa zvikanganiso